के–के आकर्षण हुनेछन् तुलसीपुर महोत्सवमा ? « Chhahara Online
के–के आकर्षण हुनेछन् तुलसीपुर महोत्सवमा ?
तुलसीपुर, ३ माघ । तुलसीपुरमा सुरु हुन लागेको तुलसीपुर महोत्सवको तयारी तिब्र रुपमा अघि बढेको छ । महोत्सवको उद्घाटन गर्न पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराइ दाङ आउने कार्यक्रम तय भएको छ । पर्यटन मन्त्री भट्टराई संगै महोत्सव उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भवानी राणा, पुर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहित प्रदेश र जिल्ला नगरबाट करीव एक सय पचास भन्दा बढि उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध नेताहरु सहभागि हुने निश्चित भएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० का संयोजक सुरज बैद्य पनि सहभागि हुने छन् ।
चार सय स्टलको व्यवस्थापन सहित महोत्सवमा साना तथा मझौला व्यवसायीलाइ प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । स्थानिय उत्पादनको बजारीकरणमा महोत्सव केन्द्रित हुने छ । पर्यटनसंग जोडिएका विविध महत्वका क्षेत्रहरुको हेलिकोप्टरबाट अवलोकन गर्ने सम्मको व्यवस्थापन गरिएको आयोजक कमिटिका स्टेयरीङ कमिटिका संयोजक विमल रिजालले बताए ।
‘हामी नेपाल भ्रमण बर्षमै केन्द्रित रहेर यो महोत्सव लगाउंदै छौं, महोत्सवमा बचेको आम्दानी हामीले सुरु गरेको वहुआयामिक सभाहललाइ मुर्तता दिन खर्च गरीने छ’, रिजालले भने । यो महोत्सव यस अघिका भन्दा भिन्नै हुने पनि बताए । किनकि यस अघिका महोत्सवमा धेरै पैसा वाहिरिएको अवस्था थियो । ‘आन्तरीक पर्यटनलाइ बढावा दिन र यहिंका व्यवसायीलाइ पनि राहतको अनुभुति दिने उदेश्यले स्टल भाडा समेत निर्धारण गरिएको छ’, रिजालले भने, स्थानियलाइ कम्तिमा २५ प्रतिसत छुटको समेत व्यवस्थापन गरीएको छ । महोत्सवमा स्वास्थ्य क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, योगा, तथा पर्यटनलाइ विशेष स्थान दिइएको छ ।